Sacuudiga iyo Imaaraatiga oo xayiraad kusoo rogay dalka Lubnaan - iftineducation.com
Sacuudiga iyo Imaaraatiga oo xayiraad kusoo rogay dalka Lubnaan
iftineducation.com – Boqortooyada Sacuudiga iyo Imaaraatiga ayaa Salaasadii shalay soo saaray amar ah in shacabka wadamadooda aysan tagin dalka Lubnaan, arrintan oo la xariirta xayiraad Sacuudiga kusoo rogay dowlada Lubnaan.
Xiisadan ayaa salka ku heysa dagaalka ka socda wadanka Siiriya oo ay jaarka yihiin Lubnaan. Boqortooyada Sacuudiga ayaa sheegtay in Kooxda Shiicada ah ee Xisbullah ay afduubtay dowlada Lubnaan, isla markaana faraha la gashay dagaalka ka socda wadanka Siiriya.
Xukuumada Sacuudiga ayaa Jimcihii lasoo dhaafay joojisay deeqdii ay siin jirtay ciidamada amaanka ee wadanka Lubnaan oo gaareysay $4 Bilyan oo dollar. Sacuudiga ayaa hada u muuqda inuu diirada saaray cadaadinta dowlada Lubnaan oo iyadu tilaabo ka qaadi weyday xoogaga Xisbullah ee dalkaasi oo ka dagaalamaya gudaha Siiriya.
Sacuudiga ayaa hada soo rogay xayiraad dhanka socdaalka ah waxayna muwaadiniintooda hada ku sugan gudaha Lubnaan ka codsadeen inay si deg degleh ulla xariiraan safaarada ay ku leeyihiin magaalada Bayruut.
Dalalka Imaaraatiga iyo Baxreyn oo kamid ah xulafada Sacuudiga ayaa iyaguna shacabkooda uga digay inay u safraan dalka Lubnaan.
Dagaalka ka socda dalka Siiriya oo hada dadaal loogu jiro in xabad joojin lagu hakiyo ayaa si weyn looga cabsi qabaa inuu isu bedalo dagaal saameya dhamaan dalalka Khaliijka, Dowlada Sacuudiga ayaa hada diyaarineysa boqolaal kun oo ciidamo ah oo ay sheegayso inay u diri doonto gudaha wadanka Siiriya arrintaasi oo ay horey uga digeen xukuumada Bashaar Al Assad iyo xulafadooda Ruushka.
Sacuudiga iyo Turkiga ayaa sidoo kale u socdaa wadahadal dhanka militariga ah iyadoo labadaasi dal la sheegay inay qorsheenayaan inay ciidamadooda u diraan gudaha Siiriya si ay gacan u siiyaan xoogaga kasoo horjeeda Daacish iyo waliba mucaaridka la dagaalamaya Bashar Al Assad.
Xukuumada Siiriya ee Bashar Al Assad ayaa todobaadyadii lasoo dhaafay guulo waaweyn ka gaartay, ciidamadaasi oo taageero dhanka dhulka ah ka helaya dagaalyahanada Xisbullah ee ka yimid Lubnaan iyo cutubyo kamid ah komaandooska IRAN, dhinaca cirka ayey taageero ka helayaan Ruushka oo duqeyn baaxadleh ka geystay wadankaasi bilihii lasoo dhaafay.
Europe: Iibka Macmacaanka MARS oo la joojiyey kadib markii laga dhexhelay Balastik!